Ntụle Semalt: Foto na-ese onyinyo site na weebụsaịtị
Taa, weebụ dị nnọọ ukwuu, onye ọ bụla nwere ike inweta ya nke ukwuu . Ndị mmadụ nwere ike ịdeghachi na weghachite foto ọ bụla ha chọrọ n'ụzọ dị mfe. Mana tupu ha emee ya, ha kwesịrị iche echiche banyere ikike nwebisiinka - web design lebanon.
Ọtụtụ ndị na-enwe mmasị ịhụ nnukwu ihe oyiyi na ntanetị. Ọ dị mfe, na ha nwere ike inweta ihe ọ bụla ha chọrọ site n'ịgbagharị na Ịntanetị. Otu n'ime ụzọ ndị mbụ a na-emebu iji wepụ foto site na weebụsaịtị dị iche iche. Mana tupu iṅomi foto, ha kwesịrị iche echiche gbasara iwu iwu ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ha kwesịrị iche na mmadụ nwere ike ịnweta foto ndị a ma ha kwesịrị ịrịọ maka ikike.
Nchịkọta foto: Achọpụta Ngwa 'maka Ndị Na-ewe Ihe Ubi
Nchịkọta foto bụ usoro nbudata nnukwu ihe oyiyi site na isi iyi na weebụ. Ọ bụ ngwá ọrụ dị mma maka ndị na-agbalị ịchọta ihe oyiyi dị mkpa iji soro isiokwu ha ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ ha. Ma ebee ka foto ndị a niile si? Enwere ọtụtụ nyiwe n'ịntanetị, nke na-enye ndị ọbịa ihe nchekwa data dị. Ma ọ bụrụ na ha achọtaghị foto kachasị mma, ha na-ejikarị Google iji nweta foto ndị na-adọrọ adọrọ nye ha. N'ihi ya, nchịkọta onyinyo yiri ka ọ bụ naanị ihe ngwọta maka ha.
Iwu Iwu Ezuchapu Foto?
Taa, ọtụtụ azụmahịa, yana ndị mmadụ n'otu n'otu, chọta ihe oyiyi niile ha chọrọ maka ọrụ ha na posts na Intanet. Ma ndị mmadụ kwesịrị ịma na ihe oyiyi na-ekpuchi na nnukwu ego agaghị abụ iwu. Ihe kachasị mkpa maka ndị na-ekpuchi ihe oyiyi bụ ịkpachara anya banyere ọnụ ọgụgụ nke ihe oyiyi ha na-efopụ. Ọ dị mkpa ịchọta foto ziri ezi, tinye ya na ntanetị mgbasa ozi dị iche iche dị ka Facebook ma ọ bụ Twitter. Ọtụtụ ndị chọrọ ijide onye na-agụ akwụkwọ
Iji ejiji nke foto
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị nwere ike iji foto ndị ị wepụtara n'onwe gị mgbe ọ bụla, ịchọrọ ịchọta foto na weebụ. E nwere ọtụtụ ebe ịntanetị ebe ndị mmadụ nwere ike iwepụ ihe osise ọ bụla, ọ bụ ezie na ndị mmadụ nweere onwe ha ka ha wepụ foto ọ bụla ha chọrọ, ọ bụrụ na ndị nwe ha nwere ike ịjụ maka ikikere. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ dị njikere nye ha foto ha n'efu. Iji zere nsogbu ọ bụla, ndị mmadụ aghaghị ichebara ụfọdụ ihe echiche. Dịka ọmụmaatụ, ha agaghị edetu foto nke ndị ama ama ama na-arụ ọrụ nzuzo.
Ọtụtụ foto na ndị na-ese foto na-etinye ihe oyiyi ha n'Ịntanet iji ree ha. Enwere ike ịnwa mmadụ ịnwapụta ihe oyiyi ma gbanwee ya, mana nke a abụghị ihe iwu kwadoro. Ha kwesịrị icheta na iwu nwebisiinka na-enye ikike niile nke ihe oyiyi ahụ n'aka onye nwebisiinka. Nke a pụtara na onye njide ahụ bụ naanị onye na-ekpebi ebe a ga-ebipụta ọrụ ya na onye ga-eji ihe oyiyi ya.
Ọ bụ ezie na foto ndị na-ekpuchi ihe na weebụ nwere ike ịbụ ọrụ dị mfe maka ndị na-ewe ihe ubi, ha kwesịrị ịkpachara anya. Dịka ọmụmaatụ, ha agaghị anakọta ihe oyiyi ndị ọzọ na ịkwanyere iwu nwebisiinka ùgwù. Ọ bụrụ na ha mee nke ahụ, nchịkọta ihe oyiyi nwere ike ịbụrụ ha ọrụ dị ukwuu ma baa uru na azụmahịa ha.